Hiran State - News: Gud baarlamaanka Shariif Hasan oo waayadii danbe iska dhaadhicyey in maamulka Puntland wax ka dhigi karo aya hada u muuqda mid ay ku dhagan yahiin mudanayaashii isag asoo doortay.
Gud baarlamaanka Shariif Hasan oo waayadii danbe iska dhaadhicyey in maamulka Puntland wax ka dhigi karo aya hada u muuqda mid ay ku dhagan yahiin mudanayaashii isag asoo doortay.
Gudoomiyaha baarlamaanka Shariif Hasan oo waayadii danbe iska dhaadhiciyey in maamulka Puntland wax ka dhigi karo ayaa hada u muuqda mid ay ku dhagan yahiin mudanayaashii isaga soo doortay kadib markii uu ka hor istaagay kulamadii caadiga ahaa?.
Ka hor inta aanan u guda galin muranka hareeyey gudoomiyaha baarlamaanka Shariif Hasan iyo mudanayasha baarlamanka oo sida laga dareemayo iyagu doonaya iney xilka ka tuuraan gudoomiyahooda ayaa hadane hayada bixisa mushaarka xildhibaanada ee UNDP ayaa aad ula yaaban mushaar xumida ay ka qeylinayaan mudanayashu iyadoo sida laga soo xigtay bilkasta bixiya mushaarka baarlamaanka iyagoo u siimarsiya gudoomiyahooda halka ay mudanayasha qarkood ku qeylinayan in aysanba helin musharaar mudo 6 libood ku dhawaad.
Sidoo kale mudanayasha aan mushaarka la siinin waa kuwa kaliya ka soo horjeeda siyaasdaha gudoomiyaha laakinse kuwa kale maba ka joogsato mushaarkooda xitaa hadii aysan soo xaadirin shirarka ay goluhu iskugu imaanayan qaarkoodna sida Cali M Geedi sidii ay xildhibaano u noqden maba soo xaadiraan. sidoo kale siyaasada Somaliya oo ah mid isbed bedel badan oo aan maalinkasta wax laga qori karin ayaa hada u muuqata iney mareyso amaba iskaka soo horjeedaan inta badan mudanaaysha baarlamanka oo isku dhinac ah garabna ka helaya Shiikh Shariif, halka dhinaca kale ay isku garabsanayan gudoomiyaha baarlamanka iyo qaar ka mid ah masuuliyinta maamulka Puntland sida laga soo xigtay dad ka ag dhaw xafiiska gudoonka baarlamanka.
Sharci iyo sharci daraba horta mudanayaasha baarlamanka xor ma u yahiin ineyba shiri karaan maadaama uu gudoomiye Shariif Hasan is laheeysiiyey shaqada iyo howlaha baarlamaanka inuu isagu waaqtigii uu doono furi karo waqtigii uu doonaan xeri karo. wadan dagaal ku jira oo hadane ay ciidamo kale soo galeen oo mudanayaashii codka shacabka ku hadlayey aan loo ogeyl iney kulmaan Somaliya ayaa lagu arkey ayuu yiri mid ka mid ah qurba joogta Somaliyeed oo sheegay halka ay dhibatada ka taagan tahay iney tahay mudanayashii ku hadlayey codka shacabka oo aan xilkooda u gudaneyn sidii la rabay.
Maxaa dhici kara hadii baarlamanka sidan u sii xirnaado oo mudanayasha la xakameeyo?
Shaki kuma jiro in baarlamanka la furayo waayo dunidani aynu ku nool nahay lama qiimeeyo madaxweyne amaba gudoomiye baarlamaan waxaa xooga la saaraa baarlamanka inuu noqdo mid jira oon bur burin marka maadaama madaxweynaha iyo gudoonka baarlamaanka ay soo doorteen mudanayasha baarlamanka oo aysan shacabku soo dooran waxa xooga la saarayaa sidii uu markasta baarlamaanku u noqon lahaa hayada ugu sareysa dalka.
Marka dhinaca kale laga eego gudoonka baarlamaanka oo isagu is tusiyey in maanta siyaasada dalka laga xakumo Puntland oo shaqsi aan halkaas ku xirmin uusan wax noqon karin ayaa hada waxaa ku dhagan mudanaashii isaga doortay ooba doonaya iney xilka ka qadaan isaguna ma doonayo in baarlamanka la furo inta uu ka soo dhamaanayo shirka Garoowe oo la doonayo in lagu dhimo tirada mudanayaasha baarlamaanka kumel gaarka oo ay isla qorsheeyeen gudoonka baarlamanka iyo xulufadiisa cuusb.
Hadaba waxanu sugnaaba waa kooxda ka bad baada fowdada uu hada baarlamanku afka la galay ka hor shirarka caalamiga ah ee lagu wado in loo qabto Somalida sanadka cusub ee inagu soo aadan.
· admin on December 04 2011 12:45:41 · 0 Comments · 1726 Reads ·
14,613,355 unique visits